Izvo Zvirongwa Zvekushambadzira Zvinotenga Kuuraya Mbiri Yako?
Chipiri, Gunyana 26, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kuita mari nezvechinyorwa hakusi nyore sezvazvinoratidzika. Nyatso tarisa chero rakakura bhuku uye iwe unowana hafu yegumi nembiri zvinosemesa zvakasiyana izvo zvinonyengerera kukumbira vaverengi kuti vaende. Uye vanowanzozviita. Nekudaro, kuita mari chinhu chakaipa chinodiwa. Ndichida kana kwete, ndinofanira kubhadhara zvikwereti zvakatenderedza pano saka ndinofanira kuyananisa kutsigira uye kushambadzira zvakanyatsonaka. Imwe nzvimbo yataida kuvandudza kuita mari yaive mune yedu